တောင်းပန်ပါတယ် စိနမျိုးနွယ်တို့ရယ် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ-ဝင်ပြီးဘေးတီးမပေးကြပါနဲ့။ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Burmese police taking sides, abusing powers: UN
Don’t believe just because he isadirector in President U Thein Sein’s office »
တောင်းပန်ပါတယ် စိနမျိုးနွယ်တို့ရယ် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ-ဝင်ပြီးဘေးတီးမပေးကြပါနဲ့။
I agree with my brother Haji U Maungmaung Skw.Yes,alot of Tayoke Kapyars even dr Tayokes cameaabuse me, threatened we with very rude words. Afterall their ABA Ne Win, Khin Nyunts etc are also Greatest Powerful Tayokes who had donealot of atrocities on Myanmar Muslims. He wrote:
ဟော-အခု ဘင်္ဂါလီ ကျူးကျော်တဲ့ပြသနာဖြစ်လာတယ်။ အတွေးတိမ်သူတွေက ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး-ပြည် တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုဆဲလာတြယ်။ အဲဒီ ဖေ့စ်ဘွတ် ပေါ်ကဆဲပွဲကြီးထဲမှာ အသားဖြူဖြူ မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း နဲ့ စိနတိုင်းက အမျိုးအနွယ်တွေတက်ကြွစွာအားပေးလိုက်ကြပုံများ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က အာဇာနည်တွေထဲမှာ သူတို့အတက် ကြွဆုံး-ဝမ်းနဲစရာပါဘဲ။ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ-ဝင်ပြီးဘေးတီးမပေးကြပါနဲ့။ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ အစ်ကိုတော်တွေ စိတ်အေးသွားရင် ကျွန်တော်တို့က အကျေအလည်ရှင်းလင်းပေးသွားမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာ အစ်ကိုတော် ဗမာတွေနဲ့အတူတူနေကြရဦးမှာလေ။
တောင်းပန်ပါတယ် စိနမျိုးနွယ်တို့ရယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေတုန်းက ကျွန်တော့ပတ်ဝန်းကျင်က အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာ အဆိုတော်လင်းလင်းရဲ့ မန္တလေးမြို့သေဆုံးတဲ့အကြောင်းစပ်ဆိုထားတဲ့သီချင်းကို အကြောင်းပြုလို့-စကားတွေပြောဖြစ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီသီချင်းစာသားပါ အကြောင်းအရာတွေကို သီချင်းပုံစံ လေးတင်နားမထောင်ဘဲ အကျယ်ချဲ့စရာမလိုဘူးလို့ထင် ပါတယ်။ ကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူး။မန္တလေးမြို့ မသေဆုံးပါဘူး- ဘယ်တော့မှလဲ သေဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခေတ်ကာလ အခြေအနေနဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာပါ။ အသားဖြူဖြူ မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း လူမျိုးများဟာ မန္တလေးမြို့ နေရာအများစုကို သိမ်းပိုက်လိုက်တာ မှန်ပေ မဲ့-အမိန့်အာဏာနဲ့ မတရားသိမ်းလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တန်ရာတန်ကြေး-တချို့နေရာတွေဆို မတန်တဆ ငွေပေး ပြီးဝယ်ထားကြတာပါ။ ကျေကျေနပ်နပ်ရောင်းချလိုက်တဲ့နေရာတွေကို ဝယ်ထား ကြတာပါ။ ရောင်းသူကိုအပစ်တင်စရာမရှိသလို-ဝယ်သူကို လဲ အပစ်မတင်သင့်ပါ။ နိုင်ငံရေး-လူမှုရေး-ဘာသာရေး လှုတ်ရှားမှုတွေမှာ သူတို့ လူများစုက ပါဝင်လေ့မရှိပေမဲ့-ဘဏ္ဍာရေး(အလှူငွေ)ကိစ္စ မှာတော့ အားကိုးအားထားပြုရတဲ့သူတွေပါ။ မည်သို့မည်ပုံ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးရောက်ရှိလာမှန်းမသိနိုင်သူ အချို့ပါသော်လဲ အများစုမှာ ကျွန်တော်တို့နှင့်တမြေထဲနေ တရေထဲသောက်သူများဖြစ်ပါတယ်။ တက်ကြွလှုတ်ရှားမှုတွေထဲမှာမပါဝင်လို့ အပစ်တင်သံတွေ ကြားနေရတဲ့အချိန်-ဖယောင်းတိုင်အရေးအခင်းမှာ ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်တွေ တော်တော်များများပါဝင်လာတာ တွေ့ရလို့ အထူးဝမ်းသာမိပါတယ်။
ငါတို့အားလုံး တသားထဲဖြစ်ပြီး-မန္တလေးမှာတော့ အတူနေ သူချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာစရာမရှိတော့ဘူး လို့ နှစ်ထောင်းအားရဖြစ်ခဲ့မိတာ အမှန်ပါ။ ဟော-အခု ဘင်္ဂါလီ ကျူးကျော်တဲ့ပြသနာဖြစ်လာတယ်။ အတွေးတိမ်သူတွေက ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး-ပြည် တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုဆဲလာတြယ်။ အဲဒီ ဖေ့စ်ဘွတ် ပေါ်ကဆဲပွဲကြီးထဲမှာ အသားဖြူဖြူ မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း နဲ့ စိနတိုင်းက အမျိုးအနွယ်တွေတက်ကြွစွာအားပေးလိုက်ကြပုံများ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က အာဇာနည်တွေထဲမှာ သူတို့အတက် ကြွဆုံး-ဝမ်းနဲစရာပါဘဲ။ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ-ဝင်ပြီးဘေးတီးမပေးကြပါနဲ့။ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ အစ်ကိုတော်တွေ စိတ်အေးသွားရင် ကျွန်တော်တို့က အကျေအလည်ရှင်းလင်းပေးသွားမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာ အစ်ကိုတော် ဗမာတွေနဲ့အတူတူနေကြရဦးမှာလေ။
Tags: Buddhism, Burma, Islam in Burma, Islamophobia, Muslim, Ne Win, Rakhine State, Rohingya people
This entry was posted on June 16, 2012 at 12:33 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.